Banyere Anyị - Qingdao Haokun Machinery Co., Ltd
Qingdao Haokun Arọ Machinery Technology Co., Ltd bụ a ụlọ ọrụ na-agụnye imewe, n'ichepụta na ẹkụre ngwá maka nkà mmụta banyere ígwè, ígwè Rolling, Ngwuputa na gburugburu ebe obibi nchebe. The isi ngwaahịa na-agụnye Kwụ Ọtọ onuete ịgbado ọkụ Pipe Mill (ma ọ bụ ERW), gburugburu ịgbado ọkụ Pipe Mill, longitudinal akpacha ajị Production Line, Edge igwe Machine na ndị ọzọ inyeaka ngwá, dị ka Hydrostatic Testing Machine na Pipe nsọtụ Beveling Machine.
The ụlọ ọrụ dị na sinik Jiulong Town Industrial Park nke Jiaozhou City of Qingdao na Shandong Province, China, nke bụ a nkume HuangDao Container Ngwọta, onye kasị ukwuu Container Ọnụ na Northern China. The adaba njem na-eweta a ukwuu mma ọnọdụ na mbupụ nke nnukwu ngwá ọrụ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị n'akụkụ ọtụtụ okporo ụzọ na netwọk, na Jiaozhouwan Highway nke dị na ndịda, nke doro anya na-eweta oké ngwá ụgbọ njem mma maka ma anụ ụlọ na esenidụt ahịa.
The mbụ ogbo nke osisi na-ewu na-ewe ebe dị ihe dị 43900 square mita, na ngụkọta akụ nke 89million Yuan (gburugburu 13million USD). The ụlọ ọrụ nwere top-ogo ọkachamara na China na anwụrụ akara mmepụta, magburu onwe-emepụta na management talent, 136 mechanicians na 39 technicians nke etiti larịị na n'elu. Ná ngwụsị nke 2009, Haokun ga-eweghara ọzọ 60000 square mita maka ya atụmatụ nke a abụọ-ogbo ewu dị ka ndọtị, nke na-agụnye a R & D Center na a anwụrụ edoghi n'ichepụta osisi. Ịmụta wildly si ọzọ ụlọ ọrụ, ha na-na innovating site n'ịkpọ mmepe nke elu Filiks na teknụzụ si mba ọzọ ụlọ ọrụ, na n'usoro nyochaa ụlọ mkpa omume. N'ihi ya, anya a ọnụ ọgụgụ nke esenidụt ahịa kwụrụ nleta na-na saịtị nnyocha, ego imekọ ihe ọnụ.
N'oge gara aga afọ kemgbe oruru nke ụlọ ọrụ, na ọ nyere Zhejiang Huzhou Jiuli Group, Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd, Shanghai BSW Petro-Pipe Co., Ltd na Singapore Fengyu Private Company, na Hydrotester nke 1200 ton, 2000 ton na 2800 ton karị, na Pipe nsọtụ Beveling Machines nke Φ1620mm, Φ820mm, Φ2540mm, na dị iche iche nkọwa. N'otu oge, ọtụtụ elu-ọkwa nchara na nnukwu dayameta ịgbado ọkụ-pipe mills e wuru na etinyere n'olu, otu nke abụọ ERW24 '' ogologo onuete ịgbado ọkụ anwụrụ mills na ndị kasị ibu n'obosara na anụ ụlọ China maka Liaoyang Large Pipe Company na Guangzhou Juyi Steel Pipe Co., Ltd; atọ gburugburu ịgbado ọkụ Pipe Mills na a elu ígwè ọkwa nke X80 andΦ1422mm maka Yangzhou Tongya Steel Pipe CP., Ltd na Petroliam Nasional Berhad (Petronas). N'ihi ya, anya na n'elu ise nkeji anọwo na-eduga larịị ma domestically na n'ebe ndịda na n'ebe ọdịda anyanwụ Asia.
Haokun Company ka mgbe niile ẹkenịmde azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "Quality mbụ, erube nkwekọrịta, Ahịa Usoro na magburu onwe Service" na obi dum na-enye ma anụ ụlọ na esenidụt ahịa na ọrụ ndị dị ka ihe ngwọta na-ike-nut nsogbu na sayensị na nkà na ụzụ, packaged imewe, nhazi na n'ichepụta, echichi na ule, technology nyefe na nkà na ụzụ ize, na ebe nke nkà mmụta banyere ígwè, ígwè Rolling, Ngwuputa na gburugburu ebe obibi nchebe. Haokun Company anọwo na-ga-kwara na customization, internationalization na nkwado nke magburu onwe ịgbado ọkụ anwụrụ Nsukka. Anyị naanị ebumnuche bụ na-akpa EBIONITISM enterprise!